Serasera sy kolontsaina: nodimandry i Hery Valisoa | NewsMada
Serasera sy kolontsaina: nodimandry i Hery Valisoa
Lavo ny andrarezina ! Tsy ho heno intsony ilay feomanga mambabo fo, nandoaka ny atifanahin’ireo nandre azy. Nindaosin’ny fahafatesana i Hery Valisoa…
Feo anisan’ny mahasarika olona maro ! Nodimandry, omaly, teo amin’ny faha-50 taony, Ravalisoa Andriamaherimanana Ratsizafy, fantatra amin’ny anarana « Hery Valisoa » amin’ny maha mpanakanto azy. Poeta, mpamelona tantara amin’ny radio, mpanentana fandaharana, mpikambana teo aloha tao amin’ny Faribolana Sandratra, ity andrarezin’ny zavakanto malagasy sy ny tontolon’ny serasera ity. Mpiasan’ny Radio Madagasikara (RNM) rahateo izy nanomboka ny taona 1996.
Niandraikitra fandaharana maro tao izy. Tamin’ny ankapobeny, saika tsapa tao anatin’ireny fandaharana niandraiketany ireny hatrany ny famelomana ny hambompom-pitiavan-tanindrazana amin’ireo mpiray firenena sy ireo tanora. Anisan’ny fandaharana niandraiketany tao amin’ny RNM ny « Ireo voromanga », nanasongadinana ireo olomangan’ny firenena sy ireo ezaka vitany ka nahatonga azy ireny ho fakan-tahaka. Tao koa ny fandaharana « Ny ela nihetezana », nentin’i Hery Valisoa nanehoana sy nijoroana vavolombelona ho an’ireo olona nahomby teo amin’ny fiainana tamina sehatra samihafa. Tokony hotahafin’ny mpiray tanindrazana sy ireo tanora izy ireny, raha ny fanazavany fahavelony. Fandaharana tao amin’ny RNM anisan’ny maro mpankafy ihany koa ny « Fanahy mirenty teny » niandraiketany. Nanasongadinana ireo mpanoratra sy ny asa soratra iarahana amin’ny fikambanana havatsa-Upem sy ny Faribolana Sandratra. Izy rahateo no nanome io anaran’ny fandaharana io.
Ankoatra ny RNM, namelona tantara maro tany amina radio tsy miankina ihany koa i Hery Valisoa. Manana feo kanto sy mahasarika ny sofina avy hatrany izy, hany ka satrin’ny mpihaino hanaraka hatramin’ny farany ny tantara lalaoviny. Teo am-piketrehana hamoaka amboaran-tononkalo izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao.
Marihina fa nanandrana nanoratra izy tany amin’ny faha-20 taony. Tena tia ny tononkalo nosoratan’i Rado sy ny sanganasan’i Randja Zanamihoatra. Nankafy ny hiran’ny tarika Ny Railovy sy ny hiran’i Jérôme Randria ihany koa i Hery Valisoa. Ny fankafizany ireny rehetra ireny no namelona ny talentam-panoratana niafitra tao anatiny.
Andrasana ao amin’ny CNEAGR Nanisana ny razana. Hoentina miala ao ny zoma 15 febroary izao, amin’ny 8 maraina, hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ao amin’ny FJKM Andravoahangy Fivavahana amin’ny 9 ora maraina alohan’ny hanafenana azy ao amin’ny fasan-drazany ao Ambohitompo, kaominina ambanivohitra Viliahazo, distrikan’Antananarivo Avaradrano.
Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana manontolo sy ny tontolon’ny zavakanto ary ny serasera ny Gazety Taratra.